Metformin ဆီးချိုစားဆေး ဘယ်လိုပေး - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဆရာ Metformin ကို အစာစားပြီးပြီးချင်း သောက်ရတာလား၊ အချိန်ခွာရသေးသလား မသိလို့ပါရှင့်။
Metformin ဆေးဟာ ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) အတွက် အများဆုံးသုံးရတဲ့ ဖြစ်တယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့သောက်သင့်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အစာရှိရင် ဆေးကို ကိုယ်ကနေစုပ်ယူတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုလည်း နည်းစေမယ်။ အစာမစားမီလည်းသောက်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆေးသောက်ထားလို့ သွေးထဲကို ဆေးရာက်ချိန်မှာ သကြားဓါတ်တက်လာတော့မှာကို အဆင်သင့်လျှော့ချပေးမယ်။ စားပြီးပြီးချင်းလည်း သောက်နိုင်တယ်။ ဆေးအညွှန်းအတိုင်းသောက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဆေးကို ဝါးမစားပါနဲ့။ ရေတခွက်နဲ့သောက်ပါ။
သာမန်ဘေးထွက်-သက်ရောက်မှုတွေက ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားနာမယ်။ အားနည်းမယ်။ ပျို့ချင်မယ်။ ဝမ်းပျက်မယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ ဆီးချိုရှိနေသူတိုင်း ဆေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဆီးချိုကနေဆက်ဖြစ်တာတွေကိုသာ သတိထားရမယ်။
ဆေးနဲ့မတည့်သူတွေရှိတယ်။ တခါမှမသောက်ဘူးသူက သတိထားရမယ်။ အင်ပြင်ထွက်မယ်၊ မျက်နှာ၊ လည်ချောင်းရောင်လာမယ်၊ အသက်ရှူကြပ်မယ်၊ ရှော့ခ်ရမယ်။
1. Metformin ဆီးချိုစားဆေး ဘယ်လိုပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/metformin.html
2. Metformin and PCOS ဆီးချိုဆေးနှင့် ကလေးမရသေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/04/metformin-and-pcos.h…